Google Inotangisa Yekutenga Insights ... uye Zvinotyisa! | Martech Zone
Google Inotangisa Ruzivo rwekutenga… uye Zvinotyisa!
China, Gumiguru 29, 2015 Douglas Karr
Rimwe remabhizimusi mahombe atakashanda nawo raive nenyaya yaive yakajairika mumabhizinesi mazhinji emunyika. Sevashambadziri, tinowanzo tarisa kubhizinesi redu sekunge pakange pasina miganhu yenyika kana shanduko nekufamba kwenguva - asi chokwadi chiri zvese chine simba rakakura. Kana iwe uchikwanisa kunyora zvemukati pane misoro inotora mukana wemwaka, yakazara maitiro, uye jogirafi, zvirimo zvinogona kuita zvirinani.
Google ichangotanga Kutenga Insights kwaunogona kuongorora vhoriyamu yekutsvaga nekufamba kwenguva uye nehuwandu hwehuwandu. Semuenzaniso, heino muenzaniso wekutsvaga kwekutsvaga piritsi mhiri kweUS:
Iwe unogona zvakare kuwana granular pamwe nekutsvagisa kwako, munzvimbo, kusvika padanho rekugumira. Izvi zvinogona kubatsira zvakanyanya nemari yako yekushambadzira uye kuita kwako kushambadzira.
Uye zvechokwadi, ivo zvakare vanopa kutsvagisa kwepamusoro kunoenderera nemwedzi uye gore iwe zvaunogona kutarisa kuburikidza nazvo.
Tags: ecommercenjere dzeGooglegoogle zvekutengesa maoneromaonero ekutenga